Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : ramandiamananahelokaroaambinnyfolonatsymipepo
Teny iditra Ramandiamanana: Heloka roa ambin' ny folo na 'tsy mipepo' (heloka, roa, amby, folo, pepo)
Mpanoratra Ramandiamanana Alfred, 1923/02/23
Lahatsoratra Tonga eo am bavahady ny posy ka apetraky ny borizano. Iny mivoaka avy ao Ramatoa Ravoahirana, nitsipitsipika toy ny fandia-fasika nahazo remby, mivimbina ravin-damba sy haingon'akanjo avy novidina teny amin'ny magazain'larivo. " Tsy mbola tonga ihany angaha ny kalesin-dalamby avy any atsimo, hoy ny fanontaniany. Tsy andriko izany hiverenan-dRajao" ! Ndrematoa Rajao vadiny dia lasa hatry ny afak'omaly, fa Ingahy Rakotoasimbola anadahin-dreniny dia mpanankarena ngezalahy ao amin'ny tapany atsimo. Tsy mba niteraka izy ary tsy mba nanangan-jaza koa, nefa ny fahanterana sy ny fahosana mandroso isan'andro. Rajao no hany zana-kavany tandrifin'ny hatsangany; nefa sampona lava ny fanjanahany azy ara-dalàna, satria Rangahy moa zanak'antitra mararirarin'ny fandanian-karena foana;